MARSI (Medical Adhesive Related Skin Injuries – ကျောကပျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါသော အရပွေား အနာတရမြား) – Shwe Myanma Thway
MARSI (Medical Adhesive Related Skin Injuries – ကျောကပျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါသော အရပွေား အနာတရမြား)
May 9, 2018 IT Support Leaveacomment
MARSI (Medical Adhesive Related Skin Injuries – ကော်ကပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အရေပြား အနာတရများ)
MARSI ဆိုတာ ကျနော်တို့နဲ့ မစိမ်းပါဘူး.
ဥပမာ… ပလာစတာ တို့၊ ဆေးသွင်းတဲ့ ပိုက်တို့ကို ထိန်းထားတဲ့ Tape တွေကို အရေပြားက ခွာလိုက်ရင် တခါတလေ နာလွန်းလို့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကြတာ၊ ခွာပြီးမှ အရေပြားလောင်တဲ့ အကွက်ကြီးတွေတွေ့ရတာ ကြုံဖူးကြတယ်ဟုတ်.. အဲ့တာ MARSI အသေးစား ပါ။
လူငယ်ပိုင်း လူလတ်ပိုင်း နဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေသေးတဲ့လူနာတွေ အတွက် နာရုံလောက်နဲ့ ပြီးသွားပေမဲ့ ၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုများ ကလေးများ နာတာရှည်လူနာများ၊ အချို့သော ဆီးချိုရောဂါ ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ဂရုမပြုမိရင် အရေပြား စုတ်ပြဲ ပြီး ဒဏ်ရာ အနာတရကနေ အခြားမလိုလားအပ်တဲ့ အရေပြားပြသနာ ဖြစ်လောက်တဲ့ အထိ MARSI ဟာ ဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်..
မိမိချစ်တဲ့ သူတွေကို ဒီလို အခြေခံ အသေးစားပြသနာ ကစတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ဝေဒနာ အကြီးကြီးတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်အောင့် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဒီ Post မှာ MARSI ကို ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုမျိုး တွေဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘယ်လို လွယ်လွယ်နဲ့ ကာကွယ်နိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြထားပါတယ်.. အသေးစိတ်သိလိုလျှင် chatbox က တဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
၁) MARSI ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်
– လူနာမှာ နဂို အရေပြားပြသနာ၊ allergies အခံရှိရင်
– လူနာ အရေပြားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ tape/plaster မသုံးရင်၊ သုံးရမှန်းမသိရင်
– Tape/Plaster ကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုကပ်ရမည်မသိရင်
– Tape/Plaster ကို စနစ်တကျ ဘယ်လို ခွာရမည်ဆိုတာမသိရင်
အပေါ်က အချက် တစ်ခုခု ကြောင့် MARSI ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂) ဘယ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ခြေများလဲ
– နာတာရှည်၊ ဆီးချို၊ ကင်ဆာ နှင့် အခြား နှစ်ရှည် ရောဂါ ကုသမှုခံယူနေသူများ နှင့် အရေးပေါ်လူနာများ၊
အကြောင်းက သူတို့ရဲ့ အရေပြားဟာ tape/plaster ကပ်လိုက်ရင် ပုံမှန်ထက် ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။
၃) MARSI ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ
-အရေကြည်ဖု ထပြီး အရေပြား စုတ်ပြဲခြင်း
-အရေပြားပေါ်ရှိ အမွှေးတွင်းထဲ ပြည်တည်အနာဖြစ်ခြင်း
-Allergic reaction ဖြစ်ပြီး အရေပြား ရောင်ကိုင်းခြင်း
ဆိုပြီး tape /plaser အရေပြားပေါ်ကပ်ခြင်းကြောင့် ရနိုင်တဲ့ MARSI အခြေခံ (၇) မျိုး ရှိပြီး ထိုမှ တဆင့် ပိုမို ပြင်းထန်သော ရောဂါဒဏ်ရာသို့ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
လူနာ တစ်ယောက်အတွက် tape/plaster တစ်ခုကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကပ်တော့မည်ဆိုလျှင်
– လူနာတစ်ဦးစီရဲ့ အရေပြား အခြေအနေကို ဦးစွာ နားလည်အောင် စစ်ဆေးပါ။ တချို့လူနာတွေက ရိုးရိုး tape သုံးလို့ရသော်လည်း တချို့လူနာများက silicon tape များသုံးရပါတယ်။
– လူနာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ tape/plaster ကိုရွေးချယ်ပါ။ အနာပေါ်၊ အသုံးပြုမှုအပေါ်လိုက်ပြီး tape/dressing အမျိုးအစား ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရပါတယ်၊ ဥပမာ – တချို့က ရေငွေအပြင် ထွက်နိုင်တဲ့ tape လိုပြီးတော့၊ တချို့က ရေလုံတဲ့ dressing လိုပါတယ်။
– Tape/Plaster ကိုစနစ်တကျ ကပ်ပါ/ခွာပါ။ ဒီအချက်က အရေးကြီးဆုံးပါ။ တချို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများပင် မလိုက်နာကြပါဘူး၊ ပုံနှင့်တကွ ရှင်းပြထားပါတယ်။ လိုအပ်သော cleanser များ၊ tape အမျိုးအစားများကို မေးမြန်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
-အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် MARSI ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း ကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။
အသေးစိတ်ကိုတော့တစ် ပုံ ခြင်းစီ မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သိထားသင့်သူများထံသို့ဝေငှခြင်းဖြင့် မိမိ ချစ်သောသူ များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ ကို MARSI မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးကြရအောင်။
ဒီ Post ကို ကိုယ်တိုင် သုတေသန ပြုထားသော 3M – Get To Know MARSI မှ မှီငြမ်းပြီး ရေးသားထားတဲ့ အတွက် သတင်းအချက်အလက်အားလုံးဟာ မှန်ကန်ကြောင်း စိတ်ချရကြောင်း အာမခံ ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ရွှေမြန်မာ့သွေး SMMT မှာ 3M Authorized Distributor များရဲ့ အရေပြားကျွမ်းကျင် Skin Specialist များ နှင့် လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ ။
အသေးစိတ်သိလိုလျှင် chatbox မှ လည်းကောင်း၊ sales@smmtmyanmar.com သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာတို့၏ အသွေးအသားထဲတွင် အမြဲ စီးဆင်းနေမည့် ရွှေမြန်မာ့သွေး။ ။
MARSI ဆိုတာ ကနြျောတို့နဲ့ မစိမျးပါဘူး.
ဥပမာ… ပလာစတာ တို့၊ ဆေးသှငျးတဲ့ ပိုကျတို့ကို ထိနျးထားတဲ့ Tape တှကေို အရပွေားက ခှာလိုကျရငျ တခါတလေ နာလှနျးလို့ မခံမရပျနိုငျဖွဈကွတာ၊ ခှာပွီးမှ အရပွေားလောငျတဲ့ အကှကျကွီးတှတှေရေ့တာ ကွုံဖူးကွတယျဟုတျ.. အဲ့တာ MARSI အသေးစား ပါ။
လူငယျပိုငျး လူလတျပိုငျး နဲ့ ကနျြးမာသနျစှမျးနသေေးတဲ့လူနာတှေ အတှကျ နာရုံလောကျနဲ့ ပွီးသှားပမေဲ့ ၊ သကျကွီး ရှယျအိုမြား ကလေးမြား နာတာရှညျလူနာမြား၊ အခြို့သော ဆီးခြိုရောဂါ ဝဒေနာရှငျမြား အတှကျ ဂရုမပွုမိရငျ အရပွေား စုတျပွဲ ပွီး ဒဏျရာ အနာတရကနေ အခွားမလိုလားအပျတဲ့ အရပွေားပွသနာ ဖွဈလောကျတဲ့ အထိ MARSI ဟာ ဆိုးရှားနိုငျပါတယျ..
မိမိခဈြတဲ့ သူတှကေို ဒီလို အခွခေံ အသေးစားပွသနာ ကစတဲ့ မလိုလားအပျတဲ့ ဝဒေနာ အကွီးကွီးတှကေနေ ကာကှယျနိုငျအောငျ့ ဗဟုသုတအနနေဲ့ ဒီ Post မှာ MARSI ကို ဘာကွောငျ့ဖွဈတယျ၊ ဘယျလိုမြိုး တှဖွေဈနိုငျတယျ၊ ဘယျလို လှယျလှယျနဲ့ ကာကှယျနိုငျလဲဆိုတာကို ပွောပွထားပါတယျ.. အသေးစိတျသိလိုလြှငျ chatbox က တဆငျ့ မေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
၁) MARSI ဘာကွောငျ့ဖွဈတယျ
– လူနာမှာ နဂို အရပွေားပွသနာ၊ allergies အခံရှိရငျ
– လူနာ အရပွေားနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ tape/plaster မသုံးရငျ၊ သုံးရမှနျးမသိရငျ
– Tape/Plaster ကို စနဈတကြ ဘယျလိုကပျရမညျမသိရငျ
– Tape/Plaster ကို စနဈတကြ ဘယျလို ခှာရမညျဆိုတာမသိရငျ
အပျေါက အခကျြ တဈခုခု ကွောငျ့ MARSI ဖွဈနိုငျပါတယျ။
၂) ဘယျသူတှမှော ပိုဖွဈနိုငျခွမြေားလဲ
– နာတာရှညျ၊ ဆီးခြို၊ ကငျဆာ နှငျ့ အခွား နှဈရှညျ ရောဂါ ကုသမှုခံယူနသေူမြား နှငျ့ အရေးပျေါလူနာမြား၊
အကွောငျးက သူတို့ရဲ့ အရပွေားဟာ tape/plaster ကပျလိုကျရငျ ပုံမှနျထကျ ထိခိုကျလှယျပါတယျ။
၃) MARSI ဘယျနှမြိုးရှိလဲ
-အရကွေညျဖု ထပွီး အရပွေား စုတျပွဲခွငျး
-အရပွေားပျေါရှိ အမှေးတှငျးထဲ ပွညျတညျအနာဖွဈခွငျး
-Allergic reaction ဖွဈပွီး အရပွေား ရောငျကိုငျးခွငျး
ဆိုပွီး tape /plaser အရပွေားပျေါကပျခွငျးကွောငျ့ ရနိုငျတဲ့ MARSI အခွခေံ (၇) မြိုး ရှိပွီး ထိုမှ တဆငျ့ ပိုမို ပွငျးထနျသော ရောဂါဒဏျရာသို့ ဦးတညျနိုငျပါတယျ။
လူနာ တဈယောကျအတှကျ tape/plaster တဈခုကို ခန်ဓာကိုယျရဲ့ မညျသညျ့နရောတှငျမဆို ကပျတော့မညျဆိုလြှငျ
– လူနာတဈဦးစီရဲ့ အရပွေား အခွအေနကေို ဦးစှာ နားလညျအောငျ စဈဆေးပါ။ တခြို့လူနာတှကေ ရိုးရိုး tape သုံးလို့ရသျောလညျး တခြို့လူနာမြားက silicon tape မြားသုံးရပါတယျ။
– လူနာနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ tape/plaster ကိုရှေးခယျြပါ။ အနာပျေါ၊ အသုံးပွုမှုအပျေါလိုကျပွီး tape/dressing အမြိုးအစား ရှေးခယျြမှုမှနျကနျရပါတယျ၊ ဥပမာ – တခြို့က ရငှေအေပွငျ ထှကျနိုငျတဲ့ tape လိုပွီးတော့၊ တခြို့က ရလေုံတဲ့ dressing လိုပါတယျ။
– Tape/Plaster ကိုစနဈတကြ ကပျပါ/ခှာပါ။ ဒီအခကျြက အရေးကွီးဆုံးပါ။ တခြို့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားပငျ မလိုကျနာကွပါဘူး၊ ပုံနှငျ့တကှ ရှငျးပွထားပါတယျ။ လိုအပျသော cleanser မြား၊ tape အမြိုးအစားမြားကို မေးမွနျးဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
-အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ MARSI ဖွဈခဲ့လြှငျလညျး ကုသမှု ခကျြခငျြးခံယူပါ။
အသေးစိတျကိုတော့တဈ ပုံ ခွငျးစီ မှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။ သိထားသငျ့သူမြားထံသို့ဝငှေခွငျးဖွငျ့ မိမိ ခဈြသောသူ မြားနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ မိသားစုဝငျမြား ကို MARSI မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးကွရအောငျ။
ဒီ Post ကို ကိုယျတိုငျ သုတသေန ပွုထားသော 3M – Get To Know MARSI မှ မှီငွမျးပွီး ရေးသားထားတဲ့ အတှကျ သတငျးအခကျြအလကျအားလုံးဟာ မှနျကနျကွောငျး စိတျခရြကွောငျး အာမခံ ပါတယျ။
ကနြျောတို့ ရှမွေနျမာ့သှေး SMMT မှာ 3M Authorized Distributor မြားရဲ့ အရပွေားကှ မျြးကငျြ Skin Specialist မြား နှငျ့ လကျတှဲပွီး လုပျဆောငျနကွေောငျး သတငျးကောငျးပါးပါရစေ ။
အသေးစိတျသိလိုလြှငျ chatbox မှ လညျးကောငျး၊ sales@smmtmyanmar.com သို့လညျးကောငျး ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
မွနျမာတို့၏ အသှေးအသားထဲတှငျ အမွဲ စီးဆငျးနမေညျ့ ရှမွေနျမာ့သှေး။ ။
← Shwe Myanma Thway’s Activities At Ang Mo Kio-Thye Hua Kwan Hospital (Singapore)
Partnership with DNR Wheels (Singapore) →